Fanohanana fiantohana - Jiro MediaLight Bias
Ny vokatra dia tsara ihany toy ny fiantohana azy. Mijoro ao ambadiky ny vokatray rehetra izahay ary raha misy tsy mety dia hataonay tsara izany - ary haingana dia haingana. Izany no fampanantenanay anao.
Ampiasao ity takelaka ity hifandraisanay aminay sy hanazavana ny anton'ilay olana. Hiverina aminao haingana dia haingana izahay mandritra ny ora fiasan'ny 9 am-6pm MF ary ao anatin'ny ora vitsivitsy amin'ny faran'ny herinandro.
Raha tsy mandeha tsara ny tarikao dia zahao ity manaraka ity:
1) Azafady esory ary apetraho indray ny bateria fanaraha-maso. Mety niova nandritra ny fandefasana azy io.
2) Andramo azafady loharanom-pahefana hafa, toy ny solosaina na seranana USB USB 3.0. (mamela antsika hanilika ny adapter AC ity)
3) Azafady mba esory ny maodera dimmer amin'ny tariby USB ary andramo ny mampiasa ilay singa raha tsy misy ny maody. (manampy amin'ny famaritana raha ny dimmer no mahatonga ny olana)
Ny zavatra hitanao tamin'ireto fitsapana etsy ambony ireto dia hahafahanay hianjera amin'ny tany tamin'ny valinteninay voalohany.
Ny tena zava-dehibe, miala sasatra! Hitsangana sy handositra izahay.